UDARA O'BRIAIN NGAPHAMBILI KWIMIBUZO EMITSHA YESIGIDI SEPHAWUNDI YESITISHI 4 - UKUZONWABISA
UDara-Briain ukuya ngaphambili kwimibuzo emitsha yezigidi zeepawundi zeChannel 4
Umboniso omtsha wemibuzo obanjwe yi-Dock yeVeki yeDara-Briain, apho i-1 yezigidi zeepawundi ibanjiwe, iza kwiChannel 4, Isikhokelo seTV inokutyhila kuphela.
Isiteshi 4 sigunyazise i-One & Six Zeros-umdlalo omtsha omdlalo apho abakhuphiswano baqala nge-jackpot ye- $ 1 yezigidi kwaye kufuneka baphendule uthotho lwemibuzo yolwazi ngokubanzi ngokuchanekileyo ukuthintela ukuncitshiswa.
Impendulo nganye eyiyo itshixa kwi-zero kwingxowa-mali yebhaso kwaye inokuhamba ngokukhawuleza isuke kwi- £ 1,000,000 iye kwi- £ 100! Umjelo 4 wokuqhula.
Ndonwabile ukusingatha lo mboniso mtsha weChannel 4 kunye neMighty Productions, utshilo u-Briain kwingxelo.
Kufanele ukuba kube yinto ehlekisayo kunye nexesha kwaye wena, ekhaya, ngokuqinisekileyo uya kucinga ukuba ngewenze ngcono kunabangeneleli. Kwaye ndifumana ukugcina nayiphi na imali abangaphumeleliyo! Ndicinga ukuba sisivumelwano, andifundanga kuprinta kuncinci.
Abakhuphiswano baya kunikwa umgca wokuphila, apho banokuthi batshintshe omnye wemibuzo yabo ukuba abafuni ukubeka emngciphekweni impendulo engeyiyo-nangona kunjalo, ukutshintsha imibuzo kuza nendleko kwiqela.
Xa iqela lifikelela kwimibuzo emithathu. uphawu, iqela labo lincitshisiwe ukusuka kubadlali abathathu ukuya kwababini, kushiyeke umdlali omnye ukuba aphendule imibuzo emibini yokugqibela bebodwa.
I-airdate ye-One kunye ne-Zeros ayikatyhilwa, nangona kunjalo uthotho luya kuba neziqendu ezithandathu ezibekwe kwiChannel 4.
Umhlekisi kunye nomsasazi Ó U-Briain usetwa ngokuqaqambisa umboniso wepaneli yokuhlekisa ngeVeki, uMfundi osafundayo: Ususiwe kunye ne-BBC yesiBini Imidlalo yoBongo yoSapho.
Jonga isikhokelo sethu seTV okanye undwendwele indawo yethu yoLonwabo ngazo zonke iindaba zamva nje.
Ukugcina ababukeli bokholo bexakekile ngenxa yesiphelo somdlalo wokugqibela
Uluhlu olupheleleyo lwabangenacala-ngubani odlala uthotho 2 kumdlalo we-ITV
Iinketho zempahla ezikwenza ubukeke umdala
indlela yokusombulula iipuzzle zesudoku ezinzima
Bear Grylls kunye noDavid Walliams
u-shane j ubhuti omkhulu ka-2018
yikomityi yecarabao kumabonakude
umhla wokukhutshwa kothotho lweTV
U-simon Pegg nick frost imuvi entsha